जग्गा बाँझो राख्दै हुनुहुन्छ, ३ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ला ! – Mission Khabar
जग्गा बाँझो राख्दै हुनुहुन्छ, ३ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ला !
मिसन खबर २ माघ २०७५, बुधबार १२:१६
काठमाडौं– सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने दाबी गर्दै आएको पनि निक्कै लामो समय भयो । अहिले नेपालको कृषी उत्पादकत्व दिनहुँ घट्दो क्रममा छ । बैदेशिक रोजगारी तथा बिदेश पलायनबाट खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेसँगै अब सरकारले लगातार ३ वर्षभन्दा बढी जग्गा बाँझो राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था ल्याउन लागेको छ ।
संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा तीन वर्षदेखि जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक साताभित्रै छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याइने बताइएको छ । विधेयक पारित भएपछि आफ्नो जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने भए स्थानीय तहमा बाँझो रहनुको कारण जानकारी दिनुपर्नेछ । धेरै जग्गा हुने व्यक्ति जग्गा बाँझो राखेर अन्तै गएर बस्न थालेपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि उत्पादकत्व बढाउन यस्तो निती ल्याउनुपरेको जानकारी दिएको छ ।
बाँझो राख्नेलाई कसुर गरेको मानिने व्यवस्था ल्याएपछि जग्गाको उपयोग र उत्पादनशील क्षमता बढ्ने सरकारी विश्वास छ । व्यक्तिको नाममा रहेको ३ करोड कित्तामध्ये कति जग्गा बाँझै छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने सरकारले अझै संकलन गर्न सकेको छैन । यो विधेयक मार्फत भूमि वर्गीकरण, उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकार कति सफल हुन्छ, केही समयपछिको प्रतिक्षाले आफै देखाउने छ ।